एक मौन आवाज लायक हेरिरहेको छ? - पालना दृश्य
by Dima 29th अक्टोबर 2020 12th जनवरी 2022
1 टिप्पणी मा एक मौन आवाज लायक हेरिरहेको छ?
फिल्म "एक साइलेन्ट भ्वाईस" विभिन्न पुरस्कारहरुमा परिणत भएको छ र over बर्षमा यो रिलिज भएकोमा ठूलो मात्रामा प्रसिद्धि प्राप्त गरेको छ। यस चलचित्रले शुको नाम गरेकी बहिरा केटीको कथालाई अनुसरण गर्दछ जो शोयाको रूपमा उही विद्यालयमा मिल्छ, जसले उनी भिन्न छ किनभने उनीलाई बदमाश गर्न थाल्छ। ऊ विन्डो बाहिर उनको हानि एड्स फेंक गर्न को रूप मा जान्छ र पनि एक घटना मा उनको रगत बनाउँछ। बदमाश केवल Ueno, शोयाको मित्र र सम्भावित प्रशंसक द्वारा प्रोत्साहित गरिएको छ। धेरै दर्शकहरूले ट्रेलरबाट यस्तो महसुस गर्छन् कि यो एकतर्फी एक मार्ग प्रेम कहानी हो ती दुई पात्रहरूलाई समावेश गर्न, तपाई यस्तो लाग्न सक्नुहुनेछ कि यो छुटकारा वा क्षमाको बारेमा हो। यो होइन, कम्तिमा यो सबै पनि होइन।
एक साइलेन्ट भ्वाईसको मुख्य कथन शाउको नामकी बहिरा केटीको कथालाई अनुसरण गर्दछ जसलाई स्कूलमा बदमाशी गरिन्छ किनभने ऊ आफ्नो अशक्तताको कारणले फरक देखिन्छ। कथाको सुरूमा उनले अरू विद्यार्थीसँग पुस्तकमा प्रश्नहरू लेख्ने र शाउको मार्फत आफ्ना प्रतिक्रियाहरू लेखेर संवादको लागि नोटबुक प्रयोग गर्छिन्। सुरुमा यो यूनो जसले उनको नोटबुकका कारण शोकोलाई हाँसोमा उडाउँछिन्, तर पछि शोए, उनोको साथी शाउक बदमाशीको साथ सामेल हुन्छन्, शौकोलाई उनको श्रवणशक्ति चोरी गरेर बेवास्ता गर्दै। उनले बोल्ने तरिकाको पनि हाँसो उडाउँदछन्, किनकि शौकोले आफ्नै आवाजको आवाज सुन्न सकिनन्। बदमाश जारी रहन्छ जबसम्म शौकोकी आमाले स्कूलमा औपचारिक गुनासो गर्न बाध्य पारिएको छ, बदमाश रोक्नको लागि। जब शोयाकी आमाले उनको व्यवहारको बारेमा थाहा पाए पछि उनी सुनको सहायताका लागि ठूलो रकम लिएर शोकोको घरतिर लाग्छिन्। शोयाकी आमा शोयोको तर्फबाट माफी माग्छिन् र आश्वासन दिन्छन् कि शोयाले शुकोलाई यस्तो व्यवहार फेरि कहिले गर्ने छैन।
शोया र शौको पहिलो पटक भेटिन्छ 6th कक्षाबाट।
शोयाले स्कूल छोडे पछि ऊ हाईस्कूलमा मिल्छ जहाँ उनी लामो समय पछि शौकोमा प्रवेश गर्छन्। यो थाहा छ कि उनले विद्यालय छोडेकी थिइन कि उनी शोयासँग भाग लिइरहेकी थिईन् किनभने उनी उनीसंग व्यवहार गरिरहेकी थिइन्। उनी उनीबाट भागिन् र रुछिन्। यो मुख्यतया जहाँ कहानी सुरु हुन्छ, र विगतको बदमाशी स्कूल दृश्यहरू केवल विगतको दर्शन थियो। बाँकी कहानी शोया सांकेतिक भाषा सिकेर र उनलाई बिस्तारै चेतावनी दिदै शौकोलाई बनाउने कोशिस गर्दैछिन्। दुवैले सँगै धेरै चुनौतिहरूको सामना गर्नुपर्‍यो किनभने उनीहरू शोयाको साथी युनोले उपहास गरेका थिए किनकी उनी उनी र शौकोकी आमालाई बदमाशी गर्थे, जसले डोईलाई उनीहरूको नयाँ सम्बन्ध वा दुई सँगै भएको स्वीकार्दैनन्।
शौको निशिमिया शोयाको साथमा मुख्य नायकको रूपमा काम गर्दछ। शिक्षकको POV बाट, यो स्पष्ट छ कि सबै Shouko स्कूलमा गर्न चाहन्छन् र स्कूल जीवन सिक्न र रमाइलो गर्न आफ्नो सँगी सहपाठीहरू सामेल छन्। शौकोको चरित्र लजालु र दयालु छ। उनले कसैलाई चुनौती दिएको जस्तो लाग्दैन, र सामान्यतया फिट हुने प्रयास गर्छिन्, उनीहरूसँग गीत गाउँछिन् आदि। शौको एक धेरै मायालु चरित्र हो र धेरै हेरचाह गर्ने तरिकामा काम गर्छिन्, जब उनी धम्की र उपहास गरिन्छन् त्यो हेर्न गाह्रो हुन्छ।
शोया इशिदा उसको आफ्नै रुचिमा कार्य गरेको जस्तो देखिदैन र सामान्यतया सबैले के गर्दैछ अनुसरण गर्दछ। यो धेरै जसो चलचित्रको पहिलो भागमा हुन्छ, जहाँ शोया शाउको बदमाशी गरिरहेकी छे। शोया आफ्नो परिपक्वता चरण सम्म आफ्नो कार्यको जिम्मेवारी लिदैन। शोया चर्को ऊर्जावान र बेसी हो, शौको भन्दा ठीक उल्टो। ऊ ज्यादै चलाख हुँदैन, साधारणतया उसले भनेको कुराको अनुरूप।
ए साइलेन्ट भ्वाईसका उप पात्रहरूले शोया र शुको बीचको कथाको प्रगतिमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए, दुबै भावनात्मक सहयोग प्रदान गर्दै निराशा हटाउने तरिकाका रूपमा काम गरिरहेका थिए र रिस उठेका थिए। उप पात्रहरू धेरै राम्रोसँग लेखिएका थिए र यसले उनीहरूलाई धेरै सान्दर्भिक बनायो, साथै उप चरित्रहरू जस्तै उनेयो, जुन फिल्मको पहिलो आधा समयमा थोरै रकम मात्र प्रयोग गरिएको थियो धेरैमा थपियो र अन्तको नजिक गहिराई दिइयो। मलाई यो फिल्मको बारेमा मनपर्‍यो र यसले प्रत्येक पात्रलाई धेरै महत्वपूर्ण र अविस्मरणीय बनायो, यो पनि चरित्र विकासको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो जुन फिल्ममा सही तरिकाले गरिएको थियो।
मुख्य कथा जारी
चलचित्रको पहिलो भागले शोको र शोयाको विगत र उनले उनलाई बदमाश गरेको र पहिलो स्थानमा उनीसँग कुराकानी गरेको कारण देखाउँदछ। यो प्रकट भएको छ कि उनी केवल उनको साथी बन्न चाहन्थिन् र यसले कहानी अझ बढी भावनात्मक बनाउँदछ। स्कूलमा शौको र शोयाको प्रचारपछि पहिलो दृश्यले शाउको र शोया दुवैले एक अर्कामा भाग गरेको नयाँ स्कूलमा भाग लिन्छन्। जब Shouko चिन्छ कि यो शोया उनको अगाडि उभिन् उनले भागेर लुक्न खोज्छिन्। शोया उनको साथ समात्छिन् र (साइन इन लैगौज) शिउकोलाई बताउँछिन् कि उनले पछि खेदेको कारण यो हो कि उनले आफ्नो नोटबुक छोडेकी थिइन। पछि शोया फेरि शौकोलाई भेट्ने प्रयास गर्‍यो तर उसलाई युजुरुले रोके र त्यहाँबाट जान भने। शोकाले शुकोलाई पुग्ने प्रयासको क्रममा यो पहिलो हो र बाँकी चलचित्रले अन्य सब प्लॉट र ट्विस्ट पनि मुछिएको छ र यसले धेरै रोमाञ्चक बनाएको छ।
पछि चलचित्रमा हामी शोयाले युजुरुसँग अन्तर्क्रिया देख्छौं किनकि उसले शाउको नजिक जान खोज्छ। उनले युजुरुलाई आफ्नो अवस्थाको वर्णन गर्छन् र उनी उनीप्रति बढी सहानुभूतिशील हुन्छिन्। यो क्षण छोटो काटिएको छ तर शोकोकी आमाले उनलाई भेट्टाउँछिन्, शोएयाको अनुहारमा थप्पड मारेर उनको अनुहारमा बुझेपछि उनलाई उनको आमा हो भनेर बुझे। यस्तो देखिन्छ कि शोयाको लागि याइको क्रोध अझै छाडेको छैन। कथा प्रगति हुन्छ र पछि हामी देख्छौं कि शौकोकी आमाले शोयालाई झन् झन् दिक्क पार्न थालेको थियो, किनभने हामीले देख्यौं कि शौकोलाई अब उनीसँग कुनै समस्या भएन। यो विचार गर्न एक धेरै रोचक गतिशील छ र यसले निश्चित रूपमा पात्रहरू बीच तनाव बढाउन मद्दत गर्दछ। यो मुख्यतः शोयाकी आमाले आफ्नी छोरीको लागि उत्तम छ भनेर चाहेकोबाट आउँदछ। उनीले यस्तो तरीकाले व्यवहार गर्ने कारण सम्भवतः सम्भव छ किनभने उनी ओब्ली शाउको लागि सबैभन्दा उत्तम चाहान्छिन् र यदि शौको खुशी छन् भने त्यो सबै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
एउटा मौन आवाज हेर्ने लायक कारणहरू
सबै भन्दा पहिले स्पष्ट कारण, कथाबाट सुरू गरौं। एक मौन आवाज को कहानी एक धेरै राम्रो तर मन छुने छ। यसले एक बहिरा केटीको अक्षमतालाई यसको सम्पूर्ण कथा संरचनाको रूपमा प्रयोग गर्दछ। कथा फिल्मको सुरूवातमा बदमाशी दृश्यहरूको साथ सुरू हुन्छ र त्यसपछि हाईस्कूलमा उनीहरूको समयतिर जान्छ भन्ने तथ्यले कहानीलाई अनुसरण गर्न र बुझ्न सजिलो बनाउँदछ। मलाई यो चलचित्रको समग्र विचार मनपर्‍यो र यसैले मैले यसलाई एक घडी दिने निर्णय गरे।
चित्रण र एनिमेशन
एक मौन आवाजको एनिमेसनको समग्र रूप कमसेकम भन्नको लागि सास लिदै छ। म भन्न सक्दिन कि यो उही स्तरमा उदाहरणको लागि शब्दहरूको बगैचा हो, तर २ घण्टा भन्दा लामो यो फिल्मको लागि यो निश्चित छ कि अचम्मको देखिन्छ। यस्तो देखिन्छ कि हरेक चरित्र कोरिएको छ र त्यसपछि पूर्णतातिर आकर्षित गरिएको छ। सेट टुक्राहरूको पृष्ठभूमि पनि धेरै विस्तृत र सुन्दर हो। म भन्न चाहान्छु कि फिल्म तपाईको मनपराउँदैन जस्तो देखिन्छ पनि तपाईको लागि समस्या हुने छैन, किनकि टी मात्र अद्भुत देखिन्छ, धेरै काम निश्चित रूपमा यस उत्पादनमा गयो र यो यसको मार्गबाट ​​स्पष्ट देखिन्छ चित्रित।
चाखलाग्दो र अविस्मरणीय पात्रहरू
त्यहाँ एउटा मौन आवाजमा धेरै यादगार पात्रहरू थिए र उनीहरूले मुख्य रूपमा फिल्मको पहिलो भागमा भूमिका खेले, उनीहरूको भूमिका शाउको सहपाठीहरूको रूपमा। धेरै जसो वास्तवमा बदमाशीमा भाग लिदैनन् र यसको सट्टामा हेर्नुहोस् र केहि गर्नुहुन्न। उनीहरूले पछि चलचित्रमा अधिक प्रदर्शन गर्ने छन्, यो उनीहरूको निर्दोषता प्रदर्शन गर्न को लागी हो जब Shouko अन्य साथीहरूले पछिल्लो बदमाशीको बारेमा सोधे।
उपयुक्त विरोधी चरित्र
यि पात्रहरु मध्ये एक मेरो नजिक अडीयो अनेयो थियो। उनी सामान्यतया बदमाशको लागि मिना उस्काउने थिइनन् तर सामान्यतया निर्दोष व्यवहार गर्ने थिइनन् र वास्तवमा जिम्मेवार लिनु पर्दैन किनकी यो शोयाले छोप्ने छ। उएनोसँग भिन्नता यो हो कि अन्य सबै विद्यार्थीहरूले यो प्रकारको व्यवहार गलत हो भनेर बुझे, उनेओले यी बान्कीहरू हाईस्कूलमा पनि प्रदर्शन गरिरहेकी छिन् जहाँ उनी शोया र शौको दुबै सँगै भएकोमा मजाक गर्छिन्। उनी रिसाएको देखिन्छ कि उसको वरिपरिको सबैले यस जस्तो हुनबाट र शाउकोलाई यस्तै व्यवहार गर्नबाट सरेका छन् र यसले उनलाई कमजोर र ईर्ष्यालु तुल्याउँछ। शोया अस्पतालमा छँदा यो धेरै वृद्धि हुन्छ।
संवाद र निकाय भाषा
यो संवाद एउटा मौन आवाजमा धेरै राम्रोसँग प्रयोग गरीएको छ र यो प्रायः दृश्यमा सा language्केतिक भाषा दृश्यहरूमा प्रस्ट देखिन्छ। वार्तालाप पनि धेरै जानकारीमूलक र होशियारीपूर्वक क्रमबद्ध गरिएको छ कि वर्णको शरीर भाषा पढ्न यसलाई धेरै सजिलो बनाउँदछ। मैले विशेष रूपमा सोया र शोकोको सम्मिलित पुल दृश्यमा यो महत्वपूर्ण थियो भनेर सोचेको थियो किनकि यसले वास्तवमै मोहित गर्‍यो कि दुबै चरित्रहरू कसरी सही महसुस गरिरहेका छन् र उनीहरूको वास्तविक अभिप्रायहरू। तल सम्मिलित हेर्नुहोस् र तपाईं म के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ देख्नुहुनेछ।
प्रतीकवाद र लुकेको अर्थ
यस चलचित्रमा अर्को राम्रो सोचेको कुरा छ जुन अशक्तता भएका व्यक्तिहरू कसरी सम्बन्ध / मित्रता सुरू गर्न सक्छन्। यो एक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूमा सीमित छैन, तर उनीहरूको लागि समान जान्छ जसको अपील आकर्षक देखिन्छ वा नागाटासुका जस्ता मिलनसार छैन।
चरित्र गहराई र आर्कहरू
चलचित्र भरि हामी हेर्छौं कि विभिन्न चरित्रले उनीहरूलाई गहिराइ दिईन्छ र केही पात्रहरू सम्पूर्ण आर्कमा पनि जान्छन्। केही व्यक्तिहरू तर्क गर्दछन् यो उदाहरणका लागि श्रृंखला जस्तो लामो सामग्री मार्फत मात्र सम्भव छ तर यो एक मौन भ्वाईस जस्ता चलचित्रमा पूर्ण रूपमा सम्भव छ, वास्तवमा फिल्मको लम्बाइका कारण। यसको एक राम्रो उदाहरण उेनो हुनेछ, जसले फिल्मको पहिलो आधा पूरा भएपछि छोराको विरोधीको भूमिका खेल्दछ। अझै धेरै चलचित्रमा उनी Shouko को लागी असन्तुष्टि देखाउँदै। उनको शौकप्रति प्रारम्भिक घृणा झन झन् ठूलो हुँदै गएको देखिन्छ, त्यसकारण शोयाको जीवन बचाए पछि शोया अस्पतालमा जानुपर्‍यो। यद्यपि चलचित्रको अन्तमा हामी देख्छौं कि ऊ धेरै बदलियो।
ठूलो अन्त्य (स्पोलियर्स)
मेरो विचारमा साइलेन्ट भ्वाइसको अन्त्य बिल्कुल त्यस्तै हुनुपर्‍यो जुन हुनु पर्‍यो। यसले चलचित्रको सुरूमा देखा परेका धेरै जसो समस्याहरू फ्लापट आउट हुने र अन्तमा सुल्झाउने समस्यासहितको अन्तिम निर्णायक समाप्ति प्रस्ताव गर्‍यो। अन्त्यले धेरै अन्य कठिनाइहरू पनि देख्दछ जुन द्वन्द्वका कारणहरू हुन् जुन शोयाको कार्यहरूको परिणाम स्वरूप समाप्त भएको थियो र अन्त्य भएको थियो। यसले श्रृंखला सामान्यतया राम्रो नोटमा समाप्त गर्न अनुमति दियो।
एउटा मौन आवाज हेर्ने लायकको कारण छैन
अनौंठो अन्त्य (Spoilers)
एक मौन आवाजको अन्त्य एक रोचक अन्त्य प्रदान गर्दछ जसले उपयुक्त निष्कर्षलाई समर्थन गर्दछ। अन्त्यले सुरुबाट धेरै मुख्य पात्रहरू पुनर्मिलन देख्दछ र उनीहरू चलचित्रभरि समावेश भएको द्वन्द्वको बाबजुद एक साथ आउँदछन्। उनो र सहारा जस्ता पात्रहरू पनि देखा पर्दछन्, धन्यवाद र शोयालाई माफी माग्दै। मलाई पक्का यकिन छैन कि यदि अन्तमा युनो र शौको बीचको सानो टकराव धेरै नै द्वेषपूर्ण मानिएको थियो तर यो वास्तवमै मसँग फिट भएन। मलाई लाग्छ यो राम्रो हुने थियो यदि ती दुई जना मात्र बनेका र साथी भए, तर यो यो देखाउन प्रयास गरिएको थियो कि यूनो अझै परिवर्तन भएको थिएन? त्यो मलाई केहि बिन्दु देखिन्छ र यो वास्तव मा केहि वर्णहरु चाप निष्कर्ष मा मानीएको थियो कि केहि हासिल छैन।
फिल्मको दोस्रो भागमा जब शोया हाईस्कूलमा छ हामी उहाँलाई थुप्रै पात्रहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको देख्छौं जसले सबैलाई आफ्नो साथी भनेर दाबी गर्छन्, उदाहरणका लागि टोमोहिरो, जसले आवाजको अभिनय इतिहास र समग्र उपस्थितिले मलाई धेरै नाराज बनायो। मलाई लाग्छ कि लेखकहरूले उनका चरित्रहरूसँग अझ धेरै गर्न सक्थ्यो र उसलाई यति मनपर्दैन। मेरो लागि ऊ भर्खरै यस अभावग्रस्त हारेको रूपमा आएको छ जो शोयाको वरिपरि सधैँ झुण्डिरहन्छ कुनै उचित कारणको लागि "उनीहरू साथीहरू" बाहेक। कसरी उनीहरू दुबै राम्रा साथी बन्न सके वा उनीहरू पहिलो स्थानमा कसरी साथी भए भन्ने बारे कुनै व्याख्या छैन। मेरो विचारमा तोमोहिरोको चरित्रमा धेरै प्रतिरोधात्मक थियो, तर यी मध्ये केवल स्पष्ट प्रयोग भएको थियो।
अपूर्ण निष्कर्ष (Spoilers)
म एउटा साइलेन्ट भ्वाईसको अन्तसँगै खुशी भएँ तर मैले महसुस गरे कि उनीहरू शोया र शुकोको सम्बन्धमा केही फरक गर्न सक्दछन्। मलाई थाहा छ यो फिल्ममा विस्तार गरिएको थियो दुई सँगै जाँदा दुई अन्य समय बिताउँदै विभिन्न अन्य गतिविधिहरू गर्दै गर्दा, तर यस्तो महसुस भयो कि उनीहरूले वास्तवमा अन्त्य नभएको जस्तो अनुभव गरे, म अझ धेरै रोमान्टिक अन्तको लागि आशा गर्दै थिएँ, तर म अझै धेरै धेरै अन्तिम समाप्ति संग सन्तुष्ट थिए।
२ घण्टा भन्दा लामो लामो मौन आवाजको कथा लामो हो। यसमा छिर्न पनि यसले लामो समय लिन सक्दछ, यद्यपि यो केही दर्शकहरूको साथ नहुन सक्छ यदि तपाईंले फिल्मको वर्णन पढ्नुभयो भने तपाईंलाई फिल्मको बारेमा थाहा हुनेछ भनेर जान्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब यो चलचित्रको पहिलो भागमा बस्न सजिलो हुनेछ।
एउटा मौन आवाजको प्यासि quite एकदम छिटो हुन्छ र यसले गइरहेको सबै कुरा ट्र्याक राख्न गाह्रो बनाउँदछ। यसको मुख्य कारण यो छ कि पुस्तकबाट चित्रण गरिएको छ र प्रत्येक अध्याय चलचित्रको सेक्सनमा गरिन्छ। यसको कहिलेकाँही अर्थ यो हो कि चलचित्रले यो भन्दा अघि वा भविष्यमा गरेको भन्दा पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सक्छ, यो फिल्मको पहिलो भागमा दुर्व्यवहार दृश्यहरूको सत्य हो। प्यासि me मेरो लागि कुनै खास समस्या थिएन तर यो अझै पनि एक स्पष्ट तत्व थियो जुन मेरो चासो बढायो। साथै मसँग एउटा मौन आवाज नलगाउन धेरै कारणहरू छैनन्।
एउटा मौन आवाजले अन्तको साथ एउटा मनपर्दो कथा प्रदान गर्दछ। यस कथाको अन्त संग त्यहाँ एक स्पष्ट सन्देश देखिन्थ्यो। यस कथाले बदमाशी, आघात, माफी र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रेम को बारे मा एक महत्वपूर्ण पाठ सिकाउँछ। मलाई युनोले शोकोलाई किन यति धेरै रिसायो भनेर अन्तर्दृष्टि मनपर्‍थ्यो होला र किन उनले फिल्मको अन्त्यसम्म गरेकी अभिनयको कारण मलाई लाग्छ कि निष्कर्षमा पुग्न सकियो वा राम्रो वर्णन गर्न सक्थें। एक मौन आवाज वर्णन गर्दछ (धेरै राम्रो) एक अशक्तता कसरी नकारात्मक एक व्यक्तिको आत्मसम्मानलाई असर गर्न सक्छ, जो व्यक्ति वरिपरिको मान्छे भन्दा टाढा धक्का जो।
मलाई लाग्छ कि यस चलचित्रको समग्र उद्देश्य बदमाशीको प्रभाव देखाउँनु र सन्देश प्रस्तुत गर्नुका साथै छुटकारा र क्षमाको शक्ति देखाउनु थियो। यदि यो उद्देश्य थियो भने, एउटा मौन आवाजले यसलाई चित्रण गर्नेमा धेरै राम्रो काम गर्‍यो। मसँग इमान्दारीताका साथ यो फिल्म एक पटक जान्छ यदि तपाईंसँग समय छ, यो निश्चित रूपमा यसको लायक छ र म पक्का छु कि तपाईं आफैंमा अफसोस भएको पाउनुहुन्न।
यस चलचित्रको लागि रेटिंग:
टैग: एनिमे animeblog animereviewonalentvoice मौन आवाज asilentvoiceanime asilentvoiceclips asilentvoicefullreview asilentvoicemovie asilentvoicemoviefullreview asilentvoicemovierview asilentvoicereview asilentvoiceromanceanime isasilentvoiceworthmytime isasalentvoice हेर्न लायक मौन आवाज हेर्न लायक छ चलचित्र दृश्यदृश्य मञ्च revieanime रोमान्सनिमेटीवाच shaliwatchasalentvoice shouldiwatchiwatchasalentvoice
Pingback: के ग्रान्ड ब्लू वर्थ हेर्दै हुनुहुन्छ? - पालना दृश्य
अघिल्लो प्रविष्टि नेटफ्लिक्स [क्लिपहरूको साथ] अवलोकन गर्न शीर्ष २ Ro रोमान्स एनिमे
अर्को प्रविष्टि Netflix मा शीर्ष 10 स्पेनिश डब गरिएको एनिमे [इन्सर्ट क्लिपहरूको साथ]